Kuratidza zvinyorwa neelebheri Pančavský mapopoma
Pančavský mapopoma emvura (Pantschefall muGerman) inzvimbo yemvura mu Špindlerův Mlýn muHradec Králové Region. Ndiyo yakanyanya kunaya mvura muCzech Republic. Yakareba makubhiti gumi nemana pakureba uye iri panzvimbo yakatarisana yekumabvazuva munzvimbo yekupedzisira yeElbe mine muMakomo eGiant mumakomo eGiant (Pančavská gomba).
Iko kunaya kwemvura kunogadzira Pančava rwizi (kurudyi sideutere yeElbe). Iyo yakagadzikana neyakajairika inoyerera kuyerera, pakati 25 l / s. Iyo inonyanya kuwanda mukunyungudika kwechando, iyo inowanzo kuve kupera kwaApril kusvika kutanga kwaMay. Mune yakakwirira mvura mamiriro, iwo mapopoma emvura matavi pane akati wandei maoko. Inoyerera munzvimbo inotsvedza uye nokudaro haigadzi kunyura.
Iro zita zvichienderana nePančavský nzizi inouya kubva kuGerman pantschen, planschen kana plantchen muCzech splash, spatter.
Kubva pane morphological point yekuona, iko kunyepa, multistage uye akawanda-ane pfumo remvura, uye kubva kune genetic point yekuona inoonekwa seyakasikwa, inoteedzana uye karovy. Iyo geological bedrock ndeye gireti. Iyo yakareba yekudiridza kwemvura iri 148 m, inodonha kubva pakukwirira kwe1298 m kusvika 1150 m.